သို့ ..ကြောင်ဝတုတ် မှ/တဆင့် ရွာသူားများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » သို့ ..ကြောင်ဝတုတ် မှ/တဆင့် ရွာသူားများ
သို့ ..ကြောင်ဝတုတ် မှ/တဆင့် ရွာသူားများ
Posted by ကထူးဆန္း on Jun 21, 2012 in Events/Fundraise | 27 comments
ရခိုင္ ေသြးခ်င္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရခိုင် သွေးချင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လက်ဆောင် ဆိုပြီး ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ ကစလို့ အလှုငွေ ကောက်ခံလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် နောက်ဆုံးကောက်ခံမဲ့ ရက် ရောက်ဖို့ ၁ဝ ရက်သာ လိုတော့တယ် နော် ။
ယခုထိ ကျွန်တော် ဒီစာရေးနေတဲ့ ၂ဝ ရက်နေ့ ည ၉း၄ဝ ထိ လက်ဝယ် ပိုင်ပိုင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တာ ၂၃၂၅၃၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် နှစ်ဆယ်သုံးသိန်းနှစ်သောင်း ငါးထောင့်သုံးရာကျပ် ) တိတိ ရ ရှိခဲ့ပါပြီ ။
ကြောင်ဝတုတ်ရေ .. ၁ဝ ရက်သာ လိုတော့တယ် ဆိုတော့ ဘယ်မှာ ဘယ်သူ့ကို လှုမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရမဲ့ အချိန်လည်း ရောက်လာပြီလေ ။ ဘယ်မှာ လှုမှာလဲဆိုတာ သိချင်နေကြမှာ လည်း အမှန်ပါဘဲ ။
ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ က ဦးဦးပါလေရာ ၊ မဆူး ၊ ဘဘ ဘလက်ချော၊ ကိုအမတ်မင်း၊ ကိုရွှေတိုက်စိုး နဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆုံဖြစ်ကြပါတယ် ။ အန်တီပဒုမ္မာ ၊ မမ ၊ နဲ့ မetone ၊ ကျွန်တော်တို့ရွာ ရန်ကုန်သားဓါတ်ပုံဆရာလေးတို့ ကတော့ မအားလို့ လာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး ။ ရှိတဲ့ သူနဲ့ဘဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တာလေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည် ။
ကြောင်ဝတုတ်ရေ .. ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရခိုင်ဒေသထိ သွားမလှုနိုင်ဘူးဆိုတော့ ပထမ အစိုးရ ၊ မီးသတ်ဌာန မှတစ်ဆင့် လှုဖို့ စဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရ မှ တဆင့် ဝိုင်းလှုကြသော အများသူငါ ပြည်သူ ပြည်သားများ နဲ့ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ရှိပြီး ဖြစ်လို့ မီးသတ်မှ တစ်ဆင့် (သို့) အစိုးရ မှတစ်ဆင့် မလှုတော့ ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ဒါနဲ့ ဦးကြောင်ကြီး အဆိုပြုထားသည့် ၈၈ ကျောင်းသားများ အဖွဲ့အစည်းကို လှုလျင်ကောင်းလား တွေးကြပါသည် ။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ ကို မလှုဟု ဆုံးဖြတ်ပြီးမှတော့ ပါတီ နိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းကြရအောင် ဆိုကာ ၈၈ ကျောင်းသား အဖွဲ့ သို့ မလူတော့ဟု ဆုံးဖြတ်ကြပြန်ပါသည် ။
သို့နှင့် ကျန် သော ဘုန်းကြီး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့် ရခိုင်ဒေသ ကိုယ်စားပြု အလူကောက်ခံနေကြသော အသင်းအဖွဲ့များမှ တစ်သင်းသင်းတို့ လှုကြလျှင် ကောင်းမလား တွေးကြပြန်ပါသည် ။ ဘုန်းကြီးဦးဆောင် ပါလျှင်လဲ ဘာသာရေး ရောထွေးသည် အပြောခံရဘွယ်ရှိသည် ဟု ယူဆကြသောကြောင့် နောက်ဆုံး ရခိုင် ဒေသ အခြေပြု အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုသာ ပေးလှုရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် ။
ကြောင်ဝတုတ်ရေ .. ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း ရခိုင် အသင်း တစ်ခုအားရှာဖွေ ခဲ့ကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို ရှာဖွေရာမှာ အခု မှဒီ အရေးအခင်းကြမှ မိုးကျရွှေကိုယ် ဖွဲ့စည်းတဲ့ အသင်း မဟုတ်တဲ့ အသင်းကို အဓိကထား ရှာခဲ့ပါတယ် ။
အဲ့ဒီမှာ အခု ရခိုင်သဟာယ အသင်း ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ရခိုင် သဟာယ အသင်း အကြောင်းနဲနဲ ပြောရရင်တော့ ဒီ အသင်းဟာ ၁၉၆၁ ခုနှစ်ကတည်း က တည်ထောင်ခဲ့သော အသင်းပါ ။ အသင်းရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကတော့ ကိုယ်ကျိုးမပါ အများကောင်းကျိုးရှာ တဲ့။ မူလ အစကတော့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရခိုင်လူမျိုးများ တွေ့ဆုံပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ၊ အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီရေးစသော လူမှုရေး လုပ်ငန်းများကို အခြေခံခဲ့ ပေမဲ့ ၁၉၈၁ ကစပြီး ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ကို ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အသင်းဖြစ်ပါသည် ။ နာဂစ်မုန်တိုင်း ၊ ဂီရိမုန်တိုင်း ဒဏ်သင့်ဒေသများကိုလည်းသွားရောက်လုပ်ဆာင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘုန်တော်ကြီးသင် ပညာရေး ဆရာ၊ဆရာမ များ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး စီမံချက် တို့ကို လည်း ဖော်ဆောင်လုပ်ကိုင်နေပြီး ၁ရ မြို့နယ်မှာ ကိုယ်စားလှယ်များရှိနေပါသည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ပညာသင်စားရီတ်ထောက်ပံ့ခြင်းစသည်တိုု့ကို ရခိုင်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှုင်း(စကာင်္ပူ) ၊ ရခိုင်လူမှုရေးအသင်း (ဂျပန်) ၊ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေးအသင်း (ဆစ်ဒနီမြို့) တို့နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
နောက် အချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြရရင် ..ဂီရိလွန်ကာလ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများပြန်လည်း နေသားတစ်ကျဖြစ်ရေး အတွက် လယ် ၃၁၈၅ ဧက အား ရေငံတားနိုင်မည့် တာရိုးတည်ဆောက်ခြင်း ၊ မျိုးစပါး နှင့် မြေဩဇာတို့ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ငါးဖမ်းလှေ ၊ငါးဖမ်းပိုက်များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း နိင်ငံတစ်ကာ NGO ဖြစ်သည့် Mercy Corps နှင့် ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း တို့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အသင်းဖြစ်ပါသည် ။
ယခုလည်း မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင် သို့ ဆန်နှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ သိန်း ၁၁ဝ ဖိုးတင်ပို့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်ဒေသ ဒုက္ခသည်များ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ကူညီထောက်ပံ့ရေး ကော်မတီ (ရန်ကုန်) ဆိုပြီး အလူငွေများကောက်ခံလျက်ရှိပါသည်။ စုစုပေါင်း ၁၉-၆-၂၀၁၂ ထိ လည်း ကျပ် ၆၉၁၆၃၁၀ဝ ကျပ် ရရှိပြီး ကြောင်းနှင့် ယခု အခါ စခန်းတွေမှာ ဝမ်းရောဂါ ကျရောက်နေသည့် အတွက် အိမ်သာများဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန် စိုင်းပြင်းလျှက်ရှိကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ် ကြောင်ဝတုတ်ရေ။
အမှတ် (၄၈၁) ဒုထပ် -ကျိုက္ကဆံလမ်း
တာမွေကြီး (ခ) ရပ်ကွက် ၊ တာမွေမြိုနယ် .
ဖုံး . ဝ၁-၄၃၀၁၇၂
သွားလှုမဲ့ ရက်ကိုတော့ ဘယ်သူတွေ သွားလှုချင်ကြလည်း ဘယ်နေ့ သွားနိုင်မလဲပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ပါ။
ဇူလိုင်လ ၈ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ၁ဝ နာရီလောက် သွားလှုကြရင်ကောင်းမယ်လို့ အကြံပြုမယ်စိတ်ကူးထားပါသည်။
ကြောင်ဝတုတ်ကို တိုင်တည်လိုက်တာကတော့ ကြောင်ဝတုတ်စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ ချစ်သော ဂေဇက်ရွာ ဘက်ယိမ်းသွားမှာလဲဆိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ အကြောင်းလေး ပြောချင်လို့ပါ ။ ကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန် သော ချစ်သော စိတ်ကို အပြည့်အဝ ခံစားရပါတယ် ။ဒါပေမဲ့ ကြောင်ဝတုတ် ချစ်သော ဂေဇက်ရွာက တော့ သူကြီးဦးခိုင်ပဲ့ကိုင်နေချိန်မှာတော့ ဘက်ယိမ်းတယ် ဆိုတာရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ရွာထဲနေ ကျွန်တော်တို့ ရွာသူားတွေတော့ ယိမ်းကြမှာပေါ့နော် ။ အမေရိကန်ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိင်ငံတော်ကြီးဟာ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် ကြီး အဖြစ်ရပ်တည်နေပေမဲ့ နေထိုင်သူများမှာတော့ လက်ဝဲ လက်ယာ အလယ်လူ လူစုံအောင် နေကြတာဘဲပေါ့ ။ ပြီးတော့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာ များနဲ့ လက်တွဲ တူယှဉ်နေကြသလို ကျွန်တော်တို့လည်း မန္တလေး ဂေဇက်ကြီးမှာ ကိုယ်နှစ်သက်ရာဘက်ယိမ်းကြသူများရှိသလို ကြောင်ဝတုတ်လို ဘယ်ဘက်မှ မယိမ်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ချင် သူများလည်း ရှိမှာပေါ့နော်။ ပြီး ကျွန်တော်တို့လည်း အင်တာမဲကြီးထဲက မန္တလေး ဂေဇက် ဒီမိုရွာကြီးမှာ ပျော်ရွှင်မူးနောက်စွာ ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာ များနဲ့ ငြင်းခုန် အနိုင်လုကြပေမဲ့ လက်တွေ့ လူ့လောကကြီးမှာတော့ အခင်မင်မပျက်ရှိကြပါတယ် ဆိုတာ ဒါ့ပုံဆြာ မောင်မောင်ဘလက်ရဲ့ ပုံနဲ့ သက်သေပြခဲ့ပြီးဆိုပေမဲံ့ ထပ်ပြီး သက်သေပြတဲ့ အနေနဲ့ ကြောင်ဝတုတ်လည်း ရွာ့ရဲ့ ဒီ လှုပ်ရှားမှု့လေးမှာ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ :grin:
ဂေဇက်ရွာကြီးကတော့ မယိမ်းမယိုင် တည့်တည့်နေပေမဲ့ အတ္တမကင်းနိုင်သေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရွာသူားတွေကတော့ ယိမ်းတဲ့ အခါယိမ်း ၊ အတတ်နိုင်ဆုံး အလယ်မှာ ရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနဲ့ ရှိနေကြဦးမှာပါလို့ ပြောချင်လို့ပါ ကြောင်ဝတုတ်ရေ။
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ ကြောင်ဝတုတ်ရေ .. ကျွန်တော်တို့ လှုမယ်ဆိုတဲ့နေရာဟာ ရွာသူားများ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒ နဲ့ ကိုက်ညီလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း ရွာသူားများကိုပြောပြပေးပါနော် ..
ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်သော ရခိုင်ဒေသနေ သွေးချင်းတို့အတွက် လက်ဆောင်ဟာ မကြာမီမှာ
– ခင်းစရာ အခင်းမရှိဘဲ မိုးအေးအေးမှာ တမံတစ်လင်းကြမ်းပြင်မှာ အိပ်နေရတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း ဒုက္ခသည် စခန်းရောက် ကလေးငယ်အချို့ အတွက် နွေးထွေးတဲ့ ညလေးတွေဖြစ်သွားစေမှာ ၊
-ဆာလောင်နေမဲ့ အဖိုးအဖွားတို့ အတွက် တစ်ရက် တစ်မနက် အသက်ဆက်စရာ ဆန်ပြုတ်တစ်ခွက် ၊
– ဘဝသစ်ပြန်စဖို့ အားခဲထားတဲ့ ညီရင်းအကို မောင်နှမတို့အတွက် အားဆေးလေးတစ်လုံး တော့ ဖြစ်သွားမှာ မလွဲပါဘူးလို့။
ကြောင်ဝတုတ်ရေ ..လှုချင်သူများရှိသေးရင်လည်း နဲများမဆို အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း ပြောပြပေးပါဦးနော်..
ရန်ကုန် ကိုရွှေတိုက်စိုး .. ဝ၉ ၄၉၃ဝ ၃၀၄၅ ကို အမတ်မင်း .. ဝ၉ ၄၂၁၁၁ ၈၆၈၅
မန္တလေး ကိုပေါက် 09-680-5396
နေပြည်တော် ကိုရွာစားကျော် ဝ၉ ၄၃ဝ ၁၇ဝ ၆၉
လိုက်ပါလှုဒါန်းလိုသူများ စာရင်းပေးပါလို့ ။
ကျွန်တော် တို့ အိမ်နားလေးမှာပဲဗျ … Sunday ဆို ကျွန်တော် လိုက်မယ်ဗျာ .. တစ်ပတ်လုံးမှာ sunday ပဲ အားတယ်။
အကောင်းဆုံး Idea ဖြစ်လို့ လက်မထောင်သွားပါတယ် ကိုထူးဆန်း !
မနေ့က သတင်းစာမှာ ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်)ရဲ့
အလှူခံလွှာလေး ဖတ်မိပြီး ရွာရဲ့အလှူကို အဲ့ဒီအသင်းကို
အခုလို လှူမယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်…
ထပ်ပြီး သက်သေပြတဲ့ အနေနဲ့ ကြောင်ဝတုတ်လည်း ရွာ့ရဲ့ ဒီ လှုပ်ရှားမှု့လေးမှာ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ :grin:
ကြောင်ဝတုတ်ရေ .. ကျွန်တော်တို့ လှုမယ်ဆိုတဲ့နေရာဟာ ရွာသူားများ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒ နဲ့ ကိုက်ညီလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း ရွာသူားများကိုပြောပြပေးပါနော် ..
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စဉ်းစားလုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ မန်းဂေဇက် ရွာသူားများအတွက် ဂုဏ်ယူလျှက် ၊ အလှုမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ တဲ့ အတွက်လည်း ဝမ်းသာ လျှက်ရှိပါကြောင်း။
၈ရက်နေ့ကတော့ နည်းနည်း လိုသေးလို့ လိုက်နိုင်မလိုက်နိုင် မသေချာ သေးပါဘူး။
ဒီရက်ပိုင်းက အလုပ်တွေ ရုတ်တရက် ပေါ်လာတတ်လို့ လျှောက်လိမ့်နေရတာများလို့ပါ။
အနားနီးမှ အလှူကို လိုက်ဖို့ မလိုက်ဖို့ ပြောပါမယ်။ လိုက်နိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားပြီး လိုက်ပါမယ်။
စာသင်ကျောင်းဆောက်ပေးတာ စပါးစိုက်ဖို့ တာရိုးတွေ ကာပေးတာ အဲဒါတွေကို သိပ်သဘောကျပါတယ်။
အလွန်ကောင်းတဲ့ အရှည် အတွက် လုပ်ရပ်တွေမို့ ထောက်ခံ အားပေးသွားပါတယ်။
ကိုထူးဆန်းရေ.. အလှူငွေ အများကြီးရလို. အားရဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ…ကျွန်တော်တို.တတွေ အခုလို အလှူဖြစ်မြောက်အောင် အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီလှူဒါန်းပေးကြတဲ့ အလှူရှင်တွေနဲ. ဝိုင်းဝန်းကူညီသူအားလုံး ကျေးဇူးတင် ပီတိဖြစ်လို.မဆုံးပါဘူး…
အခုတော့ အလှူလှူဖို. လုပ်ကြရတော့မယ်….
ကိုထူးဆန်းရဲ. ဒီစာလေးကို ဖတ်ရတော့ ကျွန်တော် ပိုလို.ပီတိဖြစ်ရတာပေါ့… ကျွန်တော်လုပ်အား ချွေးနဲစာလေးနဲ. ကိုယ့်ညီရင်းအကိုမောင်နှမတွေကို တဖက်တလမ်းက ကူညီဖေးမပေးရလို. ပြောမပြတတ်အောင် ဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာ…………
အလှူရှင်အားလုံးလဲ အဲလို ခံစားမိကြမယ်လို. ထင်ပါတယ်ဗျာ…………..
သူလဲ ကျေနပ်မယ် လို့ထင်ပါတယ်။ (ကျွန်တော့အထင်)
ဖတ်တီးကတ်တော့ တရွာလုံးက ရွာသူားတွေ ဂွတွေ ကိုင်ပြီး ထွက်လာကြလိမ့်မယ် နင့်ကို အလှည့်ကျ ကျပ်ပေးဖို့တော့ ဆိုင်းပြင်းနေပြီ။ စောစောစီးစီး အသံပေးရင် ပိုကောင်းလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
ဇွန်လ (၁၂)ရက်နေ့ ညနေ(၂)နာရီလောက်မှာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားကြရာဝယ်ဆိုသော ပိုစ့်ကို ကျွန်တော်တင်ခဲ့ပါသည်… ဝိုင်းဝန်းဩဘာပေးလိုက်ကြတာ ကော်မန့်ပေါင်း (၉၀)ကျော်…
ဇွန်လ (၁၃)ရက်နေ့ နေ့လည် (၃)နာရီခန့်မှာ အလှူခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်ကြသော ဦးဦးပါလေရာ၊ ဦးထူးဆန်း၊ ဦးဘလက်ချော၊ ကိုအမတ်မင်း၊ ကိုရွှေတိုက်စိုးတို့နှင့် ကျွန်တော်ဂရမ်းမီးရထားမှာတွေ့ကြပြီး ဝါဒရေးရာဆွေးနွေးပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်…
အဲဒီလိုပဲ… ကျွန်တော့ချွေးနည်းစာထဲက ကျပ်ငွေတစ်သောင်းကို အဲဒီနေ့ကပဲလှူဒါန်းပြီး
ဖြစ်ပါသည်… အလှူငွေစာရင်းထဲတွင် ကျွန်တော့အလှူငွေကို မဖော်ပြသေးရန်အတွက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တာပါ…
အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုပြောပြဖို့ အကြောင်းဖန်လာတော့ပြောပြ
အလှူငွေစာရင်းထဲမှာ ကျွန်တော့နာမည်ကိုထည့်လို့ရပြီ… ဦးထူးဆန်းရေ…
ကျွန်တော် မန်းတလေးဂေဇက်ကို ရင်ဘတ်ဖြင့်စာရေးသည်…
(ကိုကမ်းရေ.. ခင်ဗျားရဲ့ရင်ဘတ်ဖြင့်ဆိုသော စကားလုံးကိုခဏအငှားချပါဗျာ…)
ဘာကြောင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားကြရာဝယ်ကို ကျွန်တော်ရေးသနည်း…
ကျွန်တော်တို့ ဂေဇက်ပေါ်မှာရေးထားသော စာများအားလုံးသည် Record ဖြစ်ပါသည်…
ကျွန်ုပ်တို့ လှုပ်ရှားမှုအားလုံးသည်လဲ Record ဖြစ်နေပါပြီ…
ဂေဇက်သည် ခိုင်မာသော၊ လူသိများသော၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာရှိသောဆိုဒ်တစ်ခု အခုအချိန်မှာဖြစ်နေပါပြီ… သဂျီးဝမ်းသာလော့…
ဂေဇက်ဝင်များအနေဖြင့် အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လျှင်… စာတစ်ခုကိုရေးလျှင် မိမိရေးသောစာကို မိမိတာဝန်ယူရမည်ဆိုသကဲ့သို့ မိမိသွားသောလမ်းကြောင်းမှာ ဂေဇက်၏ပုံရိပ်ဖြစ်နေသည်
သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သော… ကျွန်ုပ်တို့ရူးသွပ်သော.. ကျွန်ုပ်တို့တွယ်တာသော ဂေဇက်ပုံရိပ်အတွက် တာဝန်ကျေသော ဂေဇက်ဝင်များဖြစ်
လိမ့်မည်… (အွန်လိုင်းဆိုဒ်တစ်ခုမို့ ဈေးအိမ်သာလိုသဘောထားသူများလဲရှိနိုင်ကောင်း၏)
ကျွန်ုပ်တို့ပြီးစလွယ်ခေါင်းစဉ်တပ်… ပြီးစလွယ်စိတ်၏စေရာအတိုင်း ထင်ရာစိုင်းခဲ့ကြသည်ဟု
ဂေဇက်မှတ်တမ်းတွင် အထင်မခံလိုသဖြင့် လူသာချင်းစာနာထောက်ထားကြရဝယ်ဟု ကျွန်တော်ရေးသည်… ဂေဇက်မှတ်တမ်းတွင်… ဂေဇက်သမိုင်းတွင် ကျန်ရစ်မည်သာ…
အလှူအားဖျက်ဆီးလိုစိတ်ဖြင့် ရေးမည်ဆိုပါကလဲ အကောင့်အသစ်တစ်ခုဖြင့် ထင်တိုင်းကြဲ
နိုင်သော်လည်း ကြောင်ဝတုတ်ဆိုသောကလောင်အား အနစ်နာခံ၍ ဂေဇက်သမိုင်းလှဖို့
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရလျှင် ကျွန်ုပ်အမျိုးကိုချစ်ပါသည်… မျက်ကမ်းမျိုးချစ်တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး…
ထပ်ပြောရရင်ဖြင့် Personal နဲ့ Professional ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိသောသူဟု လုံးဝလက်ခံထားသူဖြစ်သည်…
ဦးဆောင်သူများမှလဲ ဘက်မလိုက်ပဲလှူဒါန်းမည်ဟု ယုံကြည်ထားသည်…
ဤသည်ကား ကျွန်ုပ်၏ဘက်မလိုက်သော သဘောထားဟုပင်ဆိုပါအံ့…
ဟဲဟဲ.. တသောင်း လှူထားပြီး ဆိုတာ တနေ့က မီတင် တက်တဲ့ နေ့တုန်းကတည်းကကို သိခဲ့ရပြီးပါကြောင်း..
တမင် လူသိရှင်ကြား ဖြစ်စေချင်လို့ ကြပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါကြောင်း.. ဟိဟိ..
ချစ်စနိုးနဲ့သုံးလိုက်တာပါ… ကြီးမားတဲ့တာဝန်တစ်ခုကို အလုပ်တာဝန်မအားလပ်တဲ့ကြားထဲကယူပေးနိုင်သူတွေမို့ တလေးတစားရေးလိုက်တာပါ…ဘာကာလာမှမပါဘူးနော်…
ကာလာ .. ကာလာရှိမရှိ ကြည့်ရမယ်လား .. :grin:
နိုး ပရောဘလမ် ကက်ဇီးရိုးဘစ်
လစ်ဘရယ်ဆန်အောင် အဖြူလိုပါတော့လိုက်တာပါ :grin: :grin:
စေတနာရှင်အပေါင်းတို ့လဲ လက်ခံမယ်ထင်တာပဲရေ..
ကိုထူးဆန်းရေ …လှူဖို့အတွက် အဖက်ဖက်က တွေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တဲ့ အပေါ် အကြွင်းမရှိ ထောက်ခံလိုက်ပါတယ် ။ သွားလှူမယ့်နေ့ကျလျှင်လည်း အခါခွင့်သင့်လျှင် ပါဝင်အားဖြည့်ပါဦးမယ်နော် ။
အလှူငွေကိုတော့ နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့ 30ရက်နေ့ မှာ ကောက်ခံသူ တစ်ယောက်ယောက်ဆီ အရောက်ပို့ပေးပါမယ် ။
23 နဲ့ 24နေ့တွေမှာ ရွာသူ တစ်ယောက်စီနဲ့ ချိန်းထားပြီး …. သူတို့ ဆီက အလှူငွေပါ တခါတည်းကောက်လာပေးမလို့ပါ ။ ကြားရက်တွေ မိုးလင်းမိုးချုပ် အလုပ်ခွင်မှာချည်းမို့ .. လာဆုံပေးဖို့ မဖြစ်သေးလို့ …. နောက်ဆုံး အလှူငွေကောက်ခံရက်ဖြစ်တဲ့ 30ရက်နေ့ပိတ်ရက်မှ လာပေးရမှာကြောင့်ပါ ။
ကျုပ်ကတော့ ဒီပွဲမှာ တတ်နိုင်သလောက် လှူဖို ့စီစဉ်ပြီးပြီ မို့ဂေဇက်အဖွဲ ့ရဲ ့အလှူမှတ်တမ်းဘဲ စောင့်မျှော်နေတော့မယ်ဗျာ ။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျို ့။
ကိုထူးဆန်း စီစဉ်သမျှ သဘောကျပဒ၏။
ကျုပ်လည်း ရွေတိုက် ကတဆင့်လှူပါ့မယ်ဗျား…
အဝတ်အထည်(အသစ်တွေပါ) လှူလို့ ရသလား သိချင်ပါတယ်။
အလှူပေးတဲ့နေရာကို လိုက်ဖို့ အားခဲထားပါတယ်။
အန်တီမမ ရေ ..လှုလို့ ရသည်ဟုပြောပါသည် ခင်ဗျ။
သို့ ပေးလှူမည့် ဤအလှူသည် ဂဇက်ရွာသူရွာသား အားလုံး၏ စေတနာရင်းမှန်
အလှူဖြစ်သောကြောင့် ကြီးသော အားကောင်းသောအထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါစေသတည်း။
တီချယ်ပြောသလိုပါပဲ။ ဒုက္ခရောက်နေသူများကို ကယ်ယူဖေးမနိုင်ပါစေ။
အနော်က ရှမ်းအရှေ့ မှာရောက်နေပါတယ်၊ လှုချင်ပါတယ်။ အများကြီးလဲ မတတ်နိုင်ပါဗျာ၊ တစ်သောင်းလောက်ပေါ့။ အဲလောက်လေးနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ် ကုန်ကြ မှာလဲ မလိုလားဘူး၊ ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုပို့ရ ပါမလဲ၊ ဘဏ်ကလွှဲ ရင်အလုပ်ရှုပ်ကြမယ်ထင်တယ်နော်။ ကျိုင်းတုံမှာ ရောက်နေတာပါ။
ဆိုတော့ ထဲ့ပေးထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ဆက်မယ်ဆိုရင်..
ဒီအစီအစဉ်လေးကို အားပေးထောက်ခံကြတဲ့ ရွာသားများကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
“ လူ ” တွေကို အချိန်ကိုက် ကူညီနိုင်မှာမို့
မွန်မြတ် ထိရောက် အကျိုးရှိတဲ့ အလှူ ဖြစ်ပါတယ်..။
ရခိုင်ဒေသရှိ ဘေးဒုက္ခကြုံသူများအရေအတွက်ဟာ သိန်းဂဏန်း ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်နယ်အစိုးရက ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှာသာမက ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများအပါအဝင် အခြားနေရာများမှာ ပြန့်နှံ့ခိုလှုံနေလျှက်ရှိပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို အများကြီးအချိန်ယူလုပ်ကြရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အများကြီး ကုန်ကျဦးမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းပါတယ်ရှင့်။ အစီအစဉ်လေးတွေလည်း သဘောကျပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသကြီးကို အကုန်ဝိုင်းဝန်း ကူညီမှသာ ပြန်လည်ထူထောင်ရမှာဆိုတော့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပါဝင်တာ အရမ်း မွန်မြတ်လှပါတယ်ရှင်။ နာဂစ်တုန်းက သွားသလိုပဲ ရခိုင်ဒေသကို သွားရောက်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်။